‘नक्कली बम’ राखेर फिरौती माग्ने ३ जना पक्राउ- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
‘नक्कली बम’ राखेर फिरौती माग्ने ३ जना पक्राउ
काठमाडौँ — काठमाडौंको पुरानो बानेश्वरस्थित मातृका आँखा अस्पतालमा ‘नक्कली बम’ राखेर फिरौती मागेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–५ घरभई काठमाडौं फुटुङ बस्ने २५ वर्षीय आशिष कुँवर, उनका भाइ २० वर्षीय अभिषेक कुँवर र रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका–१ खोलावाङका ४० वर्षीय अम्मरबहादुर रोक्का मगर छन् ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनामा संलग्न तीन जनालाई सार्वजनिक गरेको हो । बिहीबार आशिषले अस्पतालका एक डाक्टरलाई पटक–पटक फोन गरी अस्पताल र घरमा बम राखेर पड्काइदिन्छु, परिवारलाई पनि ध्वस्त पार्छु भन्दै धम्की दिएका थिए । अस्पताल र घर परिवारलाई सुरक्षित राख्ने भए ३ करोड रुपैयाँ लिएर नागढुंगा आउनु भनेर धम्की दिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले बताए ।
पुरानो बानेश्वरनजिकै शंकास्पद वस्तु फेला, सेनाद्वारा डिस्पोज
बिहीबार उनीहरुले अस्पतालको तेस्रो तलाको शौचालयमा बम राखेको र अस्पतालका रिसेप्सनिस्टलाई फोन गरेको प्रहरीले जनाएको छ । धम्की आएपछि बम राखिएकोबारे प्रहरीलाई खबर भएको थियो । परिसरबाट प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतको नेतृत्वमा प्रहरीको टोली खटिएको थियो । सेनाको डिस्पोजल टोली पनि घटनास्थल पुगेको थियो । उक्त बम तर्साउनलाई मात्रै राखेको डिस्पोजल टोलीले बताएको थियो । यद्यपि त्यसमा के–कस्ता विस्फोटक पदार्थहरू थिए भन्ने बारेमा परीक्षण भइरहेको एसएसपी सिंहले बताए ।
प्रहरीका अनुसार आशिष कुँवरले उक्त अस्पतालमा आफ्नो आँखाको शल्यक्रिया गरेका थिए । जसकारण उनले अस्पतालका कर्मचारीदेखि डाक्टरहरू समेतको सम्पर्क नम्बर लिएका थिए । उनीहरूले बम युट्युबबाट हेरेर बनाएको प्रहरीलाई बताएको एसएसपी सिंहले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ १९:४८
काठमाडौंको आँखाले मधेसलाई गिज्याइरहेछ : निर्देशक मनोज पण्डित [भिडियो]
'आइटम गीत फिल्ममा राखेर कुनै गर्व लागेको छैन'
भाद्र २७, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — कोरोना महामारीबीच नेपाली फिल्मकर्मीले डिजिटल प्लेटफर्मलाई खासै वैकल्पिक बाटोको रुपमा रोज्न सकेन । मौलाउनुपर्ने समयमै कति डिजिटल प्लेटफर्म बन्द भए । महामारीले प्रदर्शन रोकिएका ३ दर्जन बढी फिल्मका लगानी फ्रिज छन् । प्रदर्शन स्थगन गरेर बसेका फिल्मकर्मीहरु डेढ वर्षदेखि बन्द हल पुरानै अवस्थामा फर्कने समयको पर्खाइमा देखिन्छन् ।
यसबीच निर्देशक मनोज पण्डितले भने डिजिटल प्लेटफर्मबाट फिल्म प्रदर्शन गर्ने तयारी थालेका छन् । विद्रोही फिल्म निर्देशकका रुपमा परिचित पण्डित 'ग्रेटर नेपाल', 'दासढुंगा', 'बधशाला'का लागि चिनिन्छन् । पण्डितसँग 'एक'को निर्माण र राजनीतिक फिल्मप्रतिको झुकावलगायतका विषयमा कान्तिपुरकर्मी रीना मोक्तानले गरेको कुराकानी :
मधेसको राजनीति, त्यहाँको विखण्डन सोचमाथि फिल्म बनाउनुभयो । यो विषय उठाउन किन आवश्यक लाग्यो ?
'एक' यसअघि प्रदर्शन भइसकेको वृत्तचित्र 'ग्रेटर नेपाल'कै अर्को शृंखला हो । ग्रेटर नेपाल वृत्तचित्र थियो । सीमा अतिक्रमण र इतिहासमा गुमेको भूभागमाथि त्यसले प्रश्न गरेको थियो । म इतिहास, भूगोलको विषयमा कुरा गर्छु । सीमा अतिक्रमण भयो भनेर प्रश्न गर्छु । तर यहाँ त देशको ठूलो अखण्ड भूभाग नै गुम्ने अवस्थामा छ । त्यो माथि प्रश्न उठ्यो । त्यही विचारमाथि 'एक' बनाएँ ।
देशको गरिमा र स्वाभिमान कुनैपनि हालतमा जोगाउनुपर्छ भन्ने फिल्मको प्रमुख कथ्य हो । खासमा मैले ग्रेटर नेपालका लागि सीमा अतिक्रमणको ठाउँ खोज्दै जाँदा वीरगञ्जमा दुई युवाहरु भेटेको थिएँ । यो २०६० तिरको कुरा हो । ती युवाहरुको दृष्टकोण ठ्याक्कै मेरो विपरीत थियो । विपरीत भए पनि उनीहरुका आफ्ना तर्क थिए । गुमेको भूभाग फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार । उनीहरु भएको पनि छुट्याउनुपर्छ भन्ने विचार बोकेका । ती दुई मेरो दिमागमा पहिल्यैदेखि थिए ।
'बधशाला' बनाइसकेपछि मलाई लाग्यो, मेरो फिल्म निर्माणको विधा त पोलिटिकल थ्रिलर हो । म अरु विषयमा त फिल्म बनाउँला, तर म वास्तवमा खुल्छु राजनीतिक फिल्ममा नै । त्यसपछि मलाई अबको फिल्म पनि राजनीतिमाथि नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यतिबेला ती दुई युवाहरुलाई सम्झें । २०६२/६३ पछि मधेस आन्दोलन देखियो । विखण्डनवादी सोचहरु देखियो । सीके राउतहरुको समूह देखियो । पहाडीलाई धपाइएको कुरा पनि देखें । यी सबै कुराले मलाई मधेसको विषयलाई फिल्ममार्फत देखाउनुपर्छ भन्ने लागेको थियो । यो आजभन्दा ६ वर्षअगाडिको सोच हो ।
भनेपछि फिल्ममा मधेसको विस्तृत रुप देख्न सकिन्छ ?
तराई एक्कासि मधेस बन्यो । मधेस भन्ने शब्दसँग डर जोडिएको छ । तराई मधेस हुँदा, नेपाल संकटमा पर्न गएको भन्ने देखिन्छ । मधेस न्यारेटिभमाथि बलियो बहस हुन जरुरी छ । त्यो क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुलाई केन्द्रले कर्णालीलाई गर्ने व्यवहार गरेकै हो ।
त्यहाँ बस्ने मानिस विकास, अधिकारबाट वञ्चित भएको कुरा सत्य हो । रौतहट मानव सूचकांकमा सबभन्दा पुच्छरमा पर्छ । केन्द्रसँग, सिंहदरबार केन्द्रित मनोविज्ञानसँग रिसाएका छन् त्यहाँका मानिसहरु । त्यो मनोविज्ञानलाई विखण्डवादी सोचहरुले बहकाउँछ कि भन्ने डर छ । उनीहरु बहकिन सक्छन्, किनकि उनीहरु निराश छन् । त्यस्तो बेलामा उनीहरु बहकिए भने भोलि देश एकदमै ठूलो विखण्डको चपेटामा पर्छ । त्यो कारणले तराई जोगाउनुपर्छ, मधेसमा बसेको त्रासहरु हटाउनुपर्छ र मानवीय जीवन समृद्ध हुनुपर्छ ।
तराई भौगोलिक हिसाबले समृद्ध भूगोल हो । तर राजनीतिक परिदृश्यहरुले तराईलाई अत्यन्त दुर्गन्धित बनाइदिएको छ । यसको पछाडि कसको शक्ति छ त्यो पनि हामीले खोतल्नुपर्छ । वैदेशिक शक्तिसँगसँगै केन्द्रलाई पनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा, नेपाली फिल्म वृत्तमा मधेसका विषय उठिरहेका हुँदैन । मधेसले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई आफ्नो मान्न सकिरहेको छैन कि । नेपाली फिल्म मधेसबाट टाढा हुनु त फिल्म क्षेत्रकै लागि पनि दुर्भाग्यको विषय होइन ?
मधेसलाई काठमाडौंले चिन्दैन, राजनीतिले पनि चिनेन । शासकले पनि चिनेन । त्यसको प्रतिफल के हो भने काठमाडौं केन्द्रित फिल्मले पनि चिनेन । त्यहाँका मानिसहरु काठमाडौं आएपछि उनीहरुले पनि मधेसलाई चिनेनन् । यसकारणले पनि मधेस अपहेलित भएको हो । मधेसलाई एक किसिमले काठमाडौंको आँखाले गिज्याइरहेको यथार्थ हो । मेरो लागि त हिमाल पहाड तराईभन्दा पनि समग्र देश महत्त्वपूर्ण हो । मैले चार किला नापेको छु । यस अर्थमा मलाई त्यो सीमाभित्रका कुराले पनि मतलब राख्छ ।
सीमाभित्रको नेपाललाई धेरै माया गर्छु । मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिम भन्ने छैन, म हरेक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छु । टेलिशृंखला जीवनचक्रमार्फत पनि ती कुरा प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ । मधेस कथाको लागि उर्वर भूमि हो । मधेसमा यति धेरै तहको कथाहरु छन् । त्यहाँ समृद्धि छ । समृद्धिको सपना हेर्ने आँखाहरु छन् । हिंसाका चरम गतिविध छन् । त्यहाँ विकृति छ, अभाव पनि छ । तर हामीले मेची–महाकाली राजमार्गभन्दा तलको भूगोललाई अत्यन्तै बेवास्ता गर्‍यौं । किन थाहा छैन ?
सम्भवतः यो कुरा हामीसँग स्थापित फिल्मको चेतनाले पनि गर्‍यो होला । मधेस त हाम्रो हो । दुर्भाग्य के छ भने, रंगले गर्दा हामीले मधेसलाई हिन्दी फिल्मसँग गाँसेर हेर्‍यौं । मधेसमा सम्पूर्ण तवरको नेपाली मनोविज्ञान छ । जहाँ अवधी छन्, भोजपुरी छन्, मैथली र थारु संस्कार छन् । यति धेरै संस्कार र सभ्यता त्यहाँ हुँदाहुँदै पनि काठमाडौंले मधेसलाई वास्ता नगर्नु नेपाली फिल्मको दुर्भाग्य हो ।
हो, मलाई नेपालभित्रको कुनै न कुनै क्षेत्रको समस्याको उजागर गर्नुछ । यसपटक मधेसको राजनीतिक विषयलाई उजागर गरेको छु । 'एक'ले मधेसको ढोका खोल्छ । मधेसालाई नेपालबाट अलग्याउने सोच विखण्डनवादीहरुको मात्र होइन, इतिहासदेखि नै मधेसलाई अलग्याइएको छ । जिम्मेवार हामी नै छौं । यसलाई तोड्नुपर्छ।
तपाईंको फिल्मले तोड्ला त विखण्डनवादी सोच ?
मेरो फिल्मले प्रयन्त गरिसक्यो । 'एक'ले थ्रेटमाथि प्रश्न गर्छ । त्यो चिन्तनमाथि प्रश्न गर्छ जसले मधेसलाई आजसम्म विखण्डन गरेको छ । मधेसमा विखण्डनको सोच कसरी विकास भयो ? 'एक'ले तराईमा अवस्थित विखण्डनको सोच मात्र होइन सिंहदरबार र बालुवाटारलाई पनि प्रश्न गर्छ । विखण्ड र विभेदमाथि प्रहार गर्छ ।
महामारीबीच नेपाली फिल्मकर्मीले डिजिटल प्लेटफर्मलाई खासै प्रयोग गर्न सकेनन् । तपाईंले कसरी आँट्नुभयो ?
आजसम्म नेपाली फिल्म मधेसका दर्शकले एकदमै कम हेर्नुको कारण उनीहरुको प्रतिनिधितित्व हो । उनीहरुको भूगोल उनीहरुको जीवन, सोच र उनीहरुको रंगलाई प्रतिनिधितित्व नगरेको कारणले आजसम्म उनीहरुले नेपाली फिल्म नहेरका हुन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा माध्यम होइन ? माध्यमभन्दा पनि विषयवस्तु ठूलो हो । 'एक'ले उनीहरुको विषयवस्तु प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने विश्वासले यो फिल्म उनीहरुले हेर्न सम्भावना छ ।
यसपटक त उनीहरुले घरमै बसेर फिल्म हेर्न सक्छन् । एप डाउनलोड गरेर मोबाइलमै हेर्न सक्छन् । त्यसैले हलमा फिल्म प्रदर्शन गर्न इच्छुक छैन म । डिजिटल प्लेटफर्ममा त दर्शकले स्वतन्त्र ढंगले आफूले चाहेको फिल्म हेर्न सक्छन् । मधेसको वर्तमान अवस्थासँग चिन्तित दर्शकले यो फिल्म हेर्न जरुरी छ । 'एक' राजनीतिक रुपले सचेत दर्शकले हेर्नुपर्छ ।
फिल्म मनोरञ्जन मात्र होइन सूचना पनि हो । समाज र देशको विकास र विकृतिमा कथ्यले भूमिका खेल्छ । कस्तो कथ्य हाबी छ भन्ने कुराले त्यो समाज कतातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने हो । देशलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुर्‍याउँदै गरेको केही त्यस्ता विचारधारालाई यो फिल्मले चिर्छ । भौगोलिक विखण्डन मात्र होइन कि चिन्तनको विखण्डन पनि अब सह्य छैन भन्ने देखाउँछ ।
फिल्मकर्मीले डिजिटल माध्यममा विश्वास गरिदियो भने नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्मको भविष्य रहेछ है ?
अबको भविष्य नै डिजिटल प्लेटफर्म हो । डिजिटल परिवर्तनले संसारलाई यति धेरै फाइदा पुगेको छ । अब यसलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न । डिजिटल प्लेटफर्मले फिल्ममेकरलाई ठूलो स्वतन्त्रता दिनेवाला छ । हल त मनोवैज्ञानिक रुपमा निरंकुश संरचना हो । त्यसले निश्चित समयावधिमा भीडको अपेक्षा गर्छ ।
यो भिडतन्त्रबाट मुक्ति दिने काम डिजिटलले गर्छ । डिजिटलमा व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रतालाई महत्त्व दिइन्छ । ती व्यक्तिगत दर्शकलाई लक्षित गरेर फिल्म निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि राम्रो फिल्म बन्छ । फिल्म वास्तवमा विषयगत उत्पादन हो । तर हामीकहाँ वस्तुगत रुपमा निर्माण हुन्छ । फिल्म वस्तु हो, वस्तुलाई मानिसले खपत गर्छन् त्यसकारण भीडले खपत गर्ने फिल्म यस्तो बन्नुपर्छ भनेर वस्तुगत फिल्म बनिरहेका छन् ।
निर्माताका अनुसार डिजिटल प्लेटफर्मलाई विश्वास गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै लगानी नउठ्नु हो । लगानीका हिसाबले कत्तिको सुरक्षित रहेछ यो प्लेटफर्म ?
आजसम्म नेपाली फिल्ममेकरले डिजिटल प्लेटफर्मलाई विश्वास गरेर काम गर्न सकेकै छैनन् । हामी यस्तो समयमा उभिएका छौं, जहाँ डिजिटल प्लेटफर्मको उपलब्धि के हुनसक्छ भनेर प्रयोग नै भएको छैन । म पनि धेरै अलमलमा छु । तर मलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा विश्वास छ । यो प्लेटफर्मबाट धेरै दर्शकमा पुग्न सकिन्छ भन्ने हो तर अत्यधिक दर्शकसामू पुग्न सकियो भने मेरो लागनी त म उठाउन सकिहाल्छु नि । म अरु कुरामा कन्फ्युज छैन । मलाई त मेरो फिल्मको गुणस्तर कति छ र त्यो फिल्म सम्बन्धित दर्शकसम्म पुर्‍याउन सक्छु कि सकिँदैन भन्ने चिन्ता छ ।
तपाईंको फिल्ममा बजारको मूल्यमान्यता विपरीतका नाम जोडिएका छन् । बजारले त चलेका कलाकार खोज्छन् । के यो फिल्म अत्यधिक दर्शकबीच पुग्ला ?
म विद्रोही फिल्ममेकर हुँ । स्थापित अवधारणाहरुसँग, कथाहरुसँग जहिले पनि प्रश्न गर्छु । मैले वर्षौंदेखि फिल्मको बजारिया कथ्यसँग लडेको छु, लडिरहनेछु । लड्ने प्रकृयामा म हिजो काँचो थिएँ भने अहिले अलि बढी परिपक्व भएको छु । यो बजारको कथ्यसँग मेरो विद्रोह छ । स्थापित अवधारणाहरु भत्काउनमा म कहिलेकाहीँ कमजोर देखिए पनि दीर्घकालीन अवस्थामा मलाई फाइदा पुगिरहेको छ । यो डिजिटल माध्यममार्फत म ठूलो सम्भावनाहरुलाई उजागर गर्दैछु भन्ने लागेको छ । केही हदसम्म सफल हुन्छु भन्ने पनि लागेको छ ।
फिल्मबाट सेन्सरसिप हट्नुपर्छ भन्ने धारणा बोक्नुहुन्छ । डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रदर्शनमा आएको सलमान खानको फिल्म 'राधे'लाई सेन्सर गर्न लगाइयो । तपाईंलाई पनि सेन्सर गर्न बाध्य पारे भने ?
डिजिटल प्लेटफर्ममा सेन्सरसिप हुनु हुँदैन । म सेन्सर गर्दिनँ । सेन्सर गर्न लगाइयो भने अदालतसम्म पुग्छु । वास्तवमा हलहरुबाट पनि सेन्सरसिप हट्नुपर्छ । फिल्मको वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छ । म सेन्सरसिप बिना फिल्म चलाउँछु ।
'एक' मा तपाईंले स्त्रीद्वेषी 'आइटम गीत' समावेश गर्नुभएको छ । फिल्ममा 'आइटम गीत' हुनुहुँदैन भन्दै बोली हिँड्ने तपाईं यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ?
हो फिल्ममा मैले 'तड्का' बोलको आइटम गीत राखेको छु । यो आइटम गीत बनाएको कुरामा गर्व छैन मलाई । फिल्म बनाउने क्रममा बजारसम्म पुग्ने मटेरियल छैन भन्ने कुराले उत्पन्न भएको सानो लोभको परिणाम हो त्यो । 'तड्का' बनाएर कुनै राम्रो काम गरें भन्ने मलाई लाग्दैन । सीमा क्षेत्रमा मैले डान्सबार देखेंको थिएँ, त्यहाँ पारी र वारीका 'आतंकी' भेला हुन जान्छन् भन्ने सूचना पाएँको थिएँ । त्यही भएर त्यो परिघटनालाई 'तड्का'को पृष्ठभूमिमा राखें । गम्भीर फिल्ममेकरका रुपले 'तड्का' मेरो सिर्जनात्मक कमजोरी हो ।
यसको मतलब बजार अघि सिर्जना झुक्छ भन्ने हो ?
कहिलेकाहीँ मनोवैज्ञानिक दबाब धेरै हुन्छ । हुन त यो फिल्ममा 'तड्का' राख्नुपर्छ भनेर कुनै दबाब थिएन । मेरी श्रीमती गायिका हुन् । उनलाई पनि स्थान दिउँ भन्ने भयो होला । तर 'तड्का' बनाइरहँदा यो प्रश्न तेर्सिनेमा जानकार थिएँ । आइटम गीत फिल्ममा बिना उदेश्य आउँदैन । भीडमा फिल्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने दबाब थियो हामीसँग । भीडको मनोविज्ञानले सर्जकलाई दबाब पर्छ, त्यसैको उपज हो 'तड्का' ।
तपाईं कुनै पार्टीतिर झुकाव राख्नुहुन्छ ?
मेरो आफ्नै राजनीतिक अवधारणा छ । अहिले सबै पार्टीहरु सत्तालाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर लागेको छ । सत्ताले जहिले पनि जनतालाई आफ्नो दासको परिधिभित्र हेर्छ । सत्ता त मालिकको संरचना हो । कुनैपनि संरचनामा मालिक हुनुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । म त्यस्तो समाजको निर्माण गर्न चाहन्छु जहाँ कोही पनि शासक नहोस् । म सत्ता कमजोर भएको देख्न चाहन्छु । म सत्ता कमजोर बनाउने सोचमा छु ।
हामीकहाँ बढी मनोरञ्जनात्मक फिल्म हेर्ने एउटा समूह छ । राजनीतिमाथि बनेको फिल्मले राम्रो बजार नपाउला भन्ने डर छैन ?
हो । बजार केही सिमित व्यक्तिहरुको हातमा छ । यसपालि म त्यो सीमित व्यक्तिहरुको पञ्जाबाट मुक्त भएर फिल्म प्रदर्शन गर्दैछु । तर त्यो गर्ने क्रममा मनोरञ्जनात्मक फिल्म हेर्ने ठूलो भीड एकातर्फ छ । राजनीतिसँग सचेतहरु मेरो फिल्मका लक्षित वर्ग हुन् । म मानिसहरुलाई अँध्यारोबाट उज्यालोमा ल्याउन चाहन्छु । म रुखो कुरा गर्छु तर, स्पष्ट भन्दिन चाहन्छु 'जनता अँध्यारोमा छन्' ।
कसरी विद्रोही फिल्म निर्देशक हुनुभयो, विद्रोही हुनु अगाडिको कथा के हो तपाईंको ?
म सानैदेखि असुरक्षित महसुस गर्थें । दुब्लो पातलो । 'बाहुन' भन्थे । अरुले पिट्थे, हेप्थे । जहिल्यै असुरक्षित अनुभव गर्थें । मलाई सबैले हेपिरहँदा केही विशेष बन्ने चाहना भयो । सम्भवत: मलाई त्यसरी नहेपिदिएको भए म यस्तो विद्रोही फिल्ममेकर बन्दिनथेँ । विद्रोह मात्र होइन सुरक्षालाई महत्त्व दिएर फिल्म बनाउने थिइन होला ।
सीमा सुरक्षाबारे 'ग्रेटर नेपाल' बनाएँ । 'दासढुंगा'ले देशका सम्भावित राम्रा नेतालाई सुरक्षा दिनुपर्छ भन्ने भयो । 'बधशाला'ले विद्रोहको बेलामा हरेक व्यक्तिको मानवअधिकार सुरक्षित गर भन्ने सन्देश दियो ।'छायाँ'ले बालबालिकाहरु यौन हिंसाबाट सुरक्षित गर भन्यो । 'खाग' मानिस मात्र होइन पर्यायवरण पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो । 'जीवनचक्र' स्वास्थ्य सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर बनाउन लागेको टेलिश्रृंखला हो ।
असुरक्षित समाज मेरो अगाडि भएकाले यसलाई महत्त्वपूर्ण ठान्दछु । आफूलाई विशेष बनाउने सोचले म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरें । यो क्षेत्रबाट मानिसहरुलाई केही न केही दिन्छु भन्ने लाग्थ्यो । अहिले फिल्मबाट कथ्य निर्माण गर्दैछु भन्ने लाग्छ । म त कथ्य निर्देशक हुँ । कथ्य समाजको रोग निको पार्ने औषधि हो ।
आफूले बनाएका फिल्ममध्ये तपाईंलाई खास लाग्ने फिल्म कुन हो ?
'ग्रेटर नेपाल' सबैन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो । म अर्को 'ग्रेटर नेपाल' बनाउन सक्दिनँ । मलाई ग्रेटर नेपाल नै मेरो जीवनको 'मास्टर पिस' लाग्छ । त्यो ग्रेटर नेपालले अहिलेको युवाहरुमा देश, सिमाना र राष्ट्रियता भन्ने कुरा रोप्न सफल भएको छ । ग्रेटर नेपाल बनाएकोमा मलाई गर्व छ । तर दिनप्रतिदिन मेरो देश भताभुंग हुँदै अस्थिर हुँदै, सार्वभौमसत्ता गुमाउँदा चिन्तित हुन्छु । महाकालीमा तुइन काटिँदा म चिन्तित हुन्छु । एमसीसीको दोधारमा देशको सार्वभौमसत्ता कतै गुम्दैन भनेर चिन्तित हुन्छु ।
तपाईं आफ्नो कामको समीक्षा आफैं गर्ने निर्देशक । तपाईंको पछिल्लो फिल्म 'खाग'ले किताबमाथि न्याय गरेन नि ?
त्यो बेला गैंडा संरक्षणमा लागेका मानिसहरुप्रतिको सम्मानको हिसाबले फिल्म बनाएँ । प्रयत्न त किताबलाई न्याय दिने भन्ने नै थियो । तर त्यो किताबका जुन पक्षहरुमा सिनेमेटिक काम हुनुपर्थ्यो त्यसमा कहीँ कतै चुकें भन्ने लाग्छ । मैले समाजप्रतिको उक्त पात्रले पुर्‍याएको योगदानमाथि कथा त भनें तर, शक्तिशाली फिल्म बनाउन सकिनँ । त्यो स्वीकार्छु ।
तस्बिरहरू : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७८ १९:२७
१८ लाख ७५ हजार नगदसहित १३ जुवाडे पक्राउ
यस्तो छ काठमाडौं महानगरपालिकामा विद्यालय सञ्‍चालनसम्बन्धी २७ बुँदे मापदण्ड
बन्चरेडाँडामा तत्काल फोहर व्यवस्थापन नहुने
चःमतीमा वृद्ध विश्राम भवनसहित पार्क